ချွေးထွက်များခြင်းဟာ ဘယ်လိုကျန်းမာရေးပြဿနာ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလဲ - Hello Sayarwon
ကျန်းမာစေမည့်အလေ့အကျင့်များ » တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး အလေ့အထများ
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe | ရေးသားသူ Dr.Aye Myat Myat Noe
Update Date မေ 12, 2020 . 1 min read
ချွေးထွက်ခြင်းဟာ နေ့စဉ်ဘဝမှာ သာမန်ဖြစ်ပျက်မှုတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ချွေးထွက် အလွန်များပြီဆိုရတော့ တစ်မျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့။ ဒါဟာကျန်းမာရေး အခြေအနေတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ချွေးထွက်များတယ်ဆိုတာ လိုတာထက်ချွေးပိုထွက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ချွေးထွက်ခြင်းဟာ ခန္ဓါကိုယ်ကိုအေးစေခြင်းဖြင့် အပူလွန်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်ကအေးနေချိန် သာမန်လူထက်ပိုပြီးချွေးထွက်နေရင် ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ချွေးထွက်များတတ်တဲ့လူတွေဟာ ခြေဖဝါး၊ လက်ဖဝါး၊ လက်မောင်းအောက်နဲ့ ခေါင်းတွေလို တစ်နေရာမက ချွေးထွက်များလေ့ရှိတယ်။ တခြားတစ်ကိုယ်လုံးခြောက်သွေ့နိုင်ချိန်မှာ တစ်နေရာထဲကပဲချွေးများနဲ့ ရွှဲရွှဲစိုနေနိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကတောင် ထိုကဲ့သို့ချွေးထွက်များခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ လက်တွေမှာချွေးထွက်လွန်ပြီး ဘောပင်၊ စာအုပ်ကိုင်ရန်ပင် ခဲယဉ်းတာမျိုး၊ ကားမောင်းဖို့ခက်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ လက်မောင်းအောက်တွေမှာ ချွေးထွက်များခြင်းက အဝတ်အစားတွေကိုစိုစေပြီး ရှက်စရာချွေးကွက်တွေလည်း ပေါ်လာစေတယ်။ အရေပြားစိုစွတ်နေမှုကြောင့် အရေပြားကိုအလွယ်တကူလည်း ရောဂါဝင်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
Primary Hyperhidrosis (အကြောင်းမဲ့ ချွေးထွက်များခြင်း)
ပထမတစ်မျိုးဟာ အကြောင်းအရင်းတိတိကျကျမရှိဘဲ ချွေးထွက်များတာမျိုးဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ မသေချာပေမယ့် နိုးကြားစေတဲ့အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါဟာ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေနိုင်တယ်။
Secondary Hyperhidrosis (အကြောင်းရှိ ချွေးထွက်များခြင်း)
ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ အကြောင်းအရင်းရှာလို့ရတဲ့ ချွေးထွက်များခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
• သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကျခြင်း၊ သိုင်းရွိုက်အလုပ်လုပ်များခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း
• ဆေးတချို့မှီဝဲနေရခြင်း- propranolol၊ pilocarpine၊ antidepressants၊ bethanechol
• အရက်သောက်ထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဆေးသုံးများခြင်း၊ အရက် ဆေးဖြတ်ခြင်း
• HIV ၊ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ တီဘီ ကဲ့သို့ရောဂါများ
• ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြော သွေးကင်ဆာ ကဲ့သို့သော သွေးဆဲလ် သို့မဟုတ် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီရောဂါများ
ဒုတိယတစ်မျိုးက ပထမတစ်မျိုးထက် ပိုရုတ်တရက်ဖြစ်တတ်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ချွေးထွက်များခြင်းခံစားရတယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းတဲ့အဖြေအတွက် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်သင့်ပါတယ်။
Accessed in January 1, 2017
Hyperhidrosis – causes.
Accessed in January
နွေရာသီတွင် အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် အသားပက်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန် အရေပြားထိန်းသိမ်းနည်း ၅ ချက်
အရေပြားပြဿနာတွေကို သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုစီမံမလဲ
သင့်အရေပြားနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲံ ဗီတာမင်ဒီ
ကျဆင်းလာတဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ဘယ်လိုပြန်မြှင့်တင်မလဲ
အသက်အရွယ် ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ငယ်စဉ်ကလောက် ကိုယ်ခံအားစနစ်ဟာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ အားလျော့သွားတဲ့အတွက် ရောဂါဖြစ်ဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေး, အအေးမိဖျားနာခြင်း အောက်တိုဘာ 1, 2020 .3mins read
လူတွေ ဘာကြောင့် ဆေးစွဲကြတာလဲ။
လူတွေ မူးယစ်ဆေးစွဲတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးတစ်ခုခုကို အလွန်အကျွံ သုံးစွဲကြတာမျိုး မြင်ဖူးကြမှာပေါ့။ ဒီအခြအနေကို ဆေးစွဲတယ်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေး, စွဲလမ်းမှုပြဿနာများ စက်တင်ဘာ 25, 2020 .2mins read
ဆိုရီရေးစစ် (psoriasis) အရေပြားပြဿနာရှိသူတွေအတွက် ကျန်းမာတဲ့ နေထိုင်နည်း
ဆိုရီရေးစစ် (Psoriasis) အရေပြားပြဿနာက autoimmune disorder တစ်မျိုးပါ။ မြင်သာတဲ့ လက္ခဏာ အနေနဲ့ အရေပြားမှာ နီမြန်းတာ၊ အဖက်တွေ လန်တာမျိုး တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
အသားအရေနှင့် အလှအပ, ဆိုရီရေးစစ်ရောဂါ စက်တင်ဘာ 23, 2020 .2mins read
စိတ်ဖိစီးမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားနဲ့ စိတ်အားငယ်မှုစတာတွေကို ခံစားနေရသူတစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင်တော့ မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ဆိုဖို့ခက်ခဲပါတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေး, မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 20, 2020 .2mins read
အိန္ဒိယမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ အမည်မဖော်နိုင်သေးတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာ
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 18, 2020 . 1 min read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 10, 2020 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် နိုဝင်ဘာ 30, 2020 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် နိုဝင်ဘာ 18, 2020 .2mins read